na desserts bụ nri dị ụtọ ma ọ bụ nke na-elu ilu nke a na-erikarị mgbe isi nri, ma ha bụ ude, achicha, achicha, ice cream, chọkọletị, wdg. Dika ha nwere onyinye caloric na nke di ike, ma na Bezzia anyi g’enweta ndi aru ike.
Ọ bụrụ na ejiri ihe mara ihe desser mee ihe, ọ bụ n’ihi enweghị nsọtụ ha ka enwere na ụdị dị iche iche ha nwere ike. Nke a bụ n'ihi na enwere desserts na okpomọkụ na textures niile (n'otu oge ahụ, na-ekpo ọkụ, oyi, oyi na-agwakọta).
Nri a na-atọkarị ndị mmadụ ụtọ, yabụ na anyị egbula oge ịkpọku gị na ngalaba a raara nye desserts Ezi ntụziaka.
Madeleines nke oroma na chocolate
por Maria onyekwere eme 2 izu .
Anyị a ga-eri nri? A bịa n'inwe nri nri ma ọ bụ iso kọfị n'ehihie, ọtụtụ n'ime anyị na-ahọrọ iri nri ...
Kuki Pan de Muerto
por Maria onyekwere eme 4 izu .
Achịcha nke ndị nwụrụ anwụ bụ achịcha dị ụtọ nke Mexico nke na-ahụkarị nke ụbọchị ndị nwụrụ anwụ. Ezi ntụziaka festive na ...
Dum ọka wheat ugu sponge achicha na mịrị
Achịcha sponge ugu dum nwere mịrị mịrị na-atụ aro taa zuru oke maka nri ụtụtụ, nri nri ma ọ bụ, gịnị kpatara na ọ bụghị, ...
Taa, anyị na -akpọ gị oku ka ị kwadebe ụtọ na -enweghị atụ na Bezzia. Achịcha brownie nwere dulce de leche na pawuda ma ọ bụ ...
Ị na -echeta iko chiiz ọhụrụ, compote na cinnamon nke anyị tụpụtara n'izu gara aga? Compote ...
Iko nke chiiz kụrụ ọhụrụ, compote na pawuda
Ị na -amasị ihe ọ dessụ appleụ apụl? Otu n'ime ọkacha mmasị anyị bụ, obi abụọ adịghị ya, achịcha achịcha puff na compote na apụl ...
Fall bụ oge dị mma iji kuki kuki. Na Bezzia anyị anaghị adị umengwụ ịgbanye oven, mana ...
Kedu onye na -adịghị achọ ịnwale kuki almond ndị a jupụtara na chocolate? Ekwela ka ọ laa gị n'iyi ...
Achịcha achịcha puff na compote na apụl
Ma ọ bụ gịnị bụ otu achịcha apụl nwere ọtụtụ apụl. Enwere m olileanya na ị masịrị apple pies ...
Kedu onye na -achọghị iso kọfị n'ehihie a na ụfọdụ pasiegos sobaos dị ka ndị anyị na -akụziri gị ...
Kuki almọnd na ibe chocolate gbara ọchịchịrị
Kedu onye na -ahụghị mkpụrụ osisi chocolate n'anya? Ọtụtụ n'ime anyị na -agbasasị ha ara. Ha dị mma…